ल अब सम्बन्ध विच्छेदका लागि अलग्गै होटल ! | Rajmarga
संसारका सम्बन्ध जोड्नका लागि अनेक स्थान प्रख्यात छन् । तर, सम्बन्ध विच्छेदका लागि पनि होटल ! सुन्दै निकै अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यही सत्य हो । नेदरल्याण्डमा एक जना व्यक्तिले वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहनेहरुलाई सहयोग गर्नका लागि एउटा विशेष होटलको व्यवस्था गरेका छन् ।
घरजमका लागि अनेकन उपाय गरिने गरेको छ । तर यदि कसैलाई आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु प-यो भने उसले नेदरल्याण्डसको डिभोर्स होटलमा गएर सजिलै सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छ । यो एउटा यस्तो होटल हो जहाँ प्रेमको कुनै बाचा बन्धन कायम गरिदैन ।
नेदरल्याण्डसका ३२ वर्षिय जिम हाल्फेन्सले यो विशेष होटल खोलेका हुन् । होटलको नाम नै डिभोर्स होटल राखिएको छ । यो होटलले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहनेहरुका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ। हाल्फेन्सका अनुसार अहिलेसम्म दश जोडीले यो होटलमा आएर सम्बन्ध विच्छेदको अफर गरिसकेका छन् । होटलप्रति मानिसको रुची बढिरहेको छ।
होटल मालिक हाल्फेन्स भन्छन्, हामीले सही कानुनी ढंगले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवसर जुटाएका छौ । जुन कम समयमा सम्भव छ ।
सम्बन्ध विच्छेदका बेला तपाईले काम पनि छोड्नुपर्ने छैन । कानुनी र सामाजिक रुपमा तपाईले सजिलै सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नुहुनेछ ।
हाल्फेन्सका अनुसार केही जोडी पुनः फिर्ता पनि आएका छन् मात्र शैंम्पेनका साथ आफ्नो डिल पक्का गर्नका लागि । होटललाई विशेष बनाउनका लागि यहाँ एउटा नोटरी पब्लिक, दुवै पक्षका लागि वकिल र मनोवैज्ञानिक संलग्न हुनेछन् । उनीहरुको संलग्नतामा सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया सजिलै र बिना कुनै तनाव हुनेछ ।
यदि सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद छ भने पनि समाधानका लागि सम्पत्ति एजेन्ट सेवा लिन सकिनेछ । होटलले प्याकेजको मूल्य करिब १८ सय डलर छ । जसमा खाने बस्ने र कानुनी खर्च समावेश छ । हाल्फेन्सका अनुसार होटलले बच्चाको भागबण्डासम्बन्धी समस्या भने समाधान गर्दैन । उनका अनुसार होटल समझदार जोडीका लागि बढी उपयुक्त छ ।
होटलले ति जोडीका लागि भागदौड गर्दछ जो व्यस्त जीवनशैलीमा बाँचिरहेको छ। हाल्फेन्सले पब्लिक रिलेशनसम्बन्धी अध्ययन गरेका छन् र इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा काम गरिसकेका छन् । हाल्फेन्स भन्छन्, हाम्रा बढीजसो ग्राहक बढी नै व्यस्त करिअर भएका हुन्छन् । हामी उनीहरुलाई चाँडै सम्बन्ध विच्छेद लिने अफर दिन्छौ । यसबाट उनीहरु दैनिकको झगडा र तोडफोडबाट पनि बच्नेछन् ।
दुःखी जोडीका लागि साताको अन्तिम दिन सम्बन्ध विच्छेदको प्याकेज छ । पहिला उनीहरु वित्तीय विषय सुल्झाउछन् र त्यसपछि उनीहरुलाई नयाँ जिन्दगी बाँच्नेका लागि मनोवैज्ञानिक कोचिङ पनि दिइन्छ । हाल्फेन्सका अनुसार अमेरिका, ब्राजिल र युरोपेली देशबाट उनको होटलबारे बढी चासो देखाइएको छ । तर, दुःखको कुरा विदेशी नागरिकले नेदरल्याण्डमा कानुनी रुपमा सम्बन्धी विच्छेद गर्न सक्दैनन् । हाल्फेन्स स्वयम भने अविवाहित छन् । त्यसैले उनी भन्छन्, एक्लो व्यक्तिका लागि सम्बन्ध विच्छेदको पनि कुनै चिन्ता हुँदैन । एजेन्सी
Previous post: पुरुषको आँखामा महिला सारीमै सेक्सी, यसको के कारण हुन सक्छ ?
Next post: यसरी ठुलो स्तन बन्यो कमाईको माध्यम